Tag: akara klout | Martech Zone
Tag: akara klout
You ga-abụrịrị ọkachamara na teknụzụ ka ị bụrụ onye ndu na Ahịa? Marketingzụ ahịa na teknụzụ dị ka ihe agbanweela n'ime afọ iri abụọ gara aga. Ọbụna ndị na-ede kọọpị kwesịrị ịghọta etu ndị mmadụ si agụ peeji - na-eme nnwale A / B, ịmata ojiji ọcha, na ịlele eserese ọkụ. Ndị na-ahụ maka ika na-ekesa ntuziaka ndị edeturu nke nwere pikselụ obosara, agba dị mkpa na okwu mkparịta ụka na ika ahụ niile anwale ma gosipụta na teknụzụ. Direct ahịa ga-
Ọtụtụ, ọtụtụ afọ gara aga, abụ m onye nyocha na akwụkwọ akụkọ. Kwa izu, m na-achịkọta data sitere na usoro mmepụta na nkesa anyị wee rụọ ọrụ iji chọta ebe enwere oge ma ọ bụ ego iji chekwaa. Ọ bụ ọrụ siri ike mana enwere m ezigbo onye ndu na afọ iri m rụrụ ọrụ ebe ahụ, anyị belata mmefu ego anyị na-arụ ọrụ kwa afọ. Ọ bụ ọrụ na-akwụghachi ụgwọ dị ukwuu. Enwere m onwe m maka mmefu ego nke ọtụtụ nde
Otu n'ime ndị ahịa m bụ Widen Enterprises. Widen bụ ụlọ ọrụ dị afọ 60 nke malitere na teknụzụ prepress. N'adịghị ka ụfọdụ ụlọ ọrụ na-ebipụta akwụkwọ, Widen adịghị eguzo ma na-ele ka mmalite na-agbanwe ụlọ ọrụ ha. Kama, Widen agbanweela na ntanetị housentanetị dị ike. Ugbu a, ha na-agbanwe ụlọ ọrụ njikwa akụ dijitalụ. O nwere ike ịbụ na ị gụọla ụfọdụ posts n’oge gara aga na igwe ojii na-akọwapụta. Ọtụtụ ihe m nwere mmasị na mbụ bịara na-arụ ọrụ na BlueLock,
Naanị nweta ihe edeturu site na onye nkwukọrịta (nnukwu aha) na Yooba.com, ọrụ ntanetị nke na-akwadebe ịmalite mmiri a. Vidio ahụ dị ntakịrị ma ọdịnaya dị na saịtị ahụ na-akpali akpali: Yooba bụ ọrụ B2B weebụ maka ndị ọkachamara n'ahịa. Ebumnuche anyị bụ ime ka o kwe gị omume ilekwasị anya na imepụta ihe na rụzuru. Yooba na-enye gị usoro ikpo okwu niile maka ahụmịhe ahịa ahịa dijitalụ gị. Anyị na-enye Bochum na ebe nchekwa data